Madaxweyne Xasan Oo Ku Sii Jeeda Kismaayo – Radio Muqdisho
Madaxweyne Xasan Oo Ku Sii Jeeda Kismaayo
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in uu gaaro magaalada Kismaayo oo uu ku sii jeedo, si uu uga qeyb galo xaflad loo sameynayo Baarlamaanka Maamulka Jubba oo dhawaan ay soo gaba gabowday soo xulistooda.
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa gabi ahaanba dadka ku dhaqan ay diyaar garow ugu jiraan soo dhaweynta Wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana lagu arkayaa dadka oo wata sawirada madaxweyne Xasan.
Gawaari aad u fara badan oo ay ku xaranyihiin Sawirada Madaxweynaha iyo Calanka Soomaaliya iyo kan maamulka Jubba ayaa ku gaaf wareegaya magaalada kuwaa oo diyaar garow ugu jira soo dhaweynta Wufuuda maanta gaareysa halkaasi oo uu ugu horeeyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Mas’uuliyiinta Maamulka Jubba Land ayaa ku sugan Garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kuwaa oo u diyaar garoobaya soo dhaweynta Wafdiga Madaxweynaha.
Wixii warar ee Ku soo kordha wararkaasi Waan Idiin la socodsiin doonaa Insha’allah.
Howlgalo Ammaanka Lagu Xaqiijinayo Oo Beydhabo Laga Sameeyay